Wasiir Bayle oo Magaalada Baydhabo ku dhagax dhigay dhismaha wado laami ah. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasiir Bayle oo Magaalada Baydhabo ku dhagax dhigay dhismaha wado laami ah.
Wasiir Bayle oo Magaalada Baydhabo ku dhagax dhigay dhismaha wado laami ah.
Wasiirka Maaliyadda XFS mudane Cabdiraxman Ducaale Bayle iyo wafti uu hogaaminayo oo safar shaqo ku joogo magaalada Baydhabo ee Maamulka Koonfur Galbeed, isagoo halkaas ku dhagax dhigay wadamo laami oo dharerkeedu gaarayo 3.5km.
Previous articleGudoomiyaha Degmadda Maxaas oo ka warbixiyey dad dhawaan lagu dilay degmada Maxaas.
Next articleShirka Golaha Wasiirrada Xukuumadda Soomaaliya oo Kismaayo ka dhacaya